CNC Wood Rogitaanka Machine Lathe
Birta caaryada Machine
Mashiinnada Goynta/Mashiinka Goynta haragga
Qaybaha firaaqada, Qalabka & Qalabka
Gaaska kaabayaasha ah ee mashiinka goynta leysarka fiber
Horumar degdeg ah ee dhaqaalaha adduunka, shuruudaha xawaaraha, tayada iyo qiimaha wax soo saarka biraha ayaa sii kordhayay, iyo kakanaanta geeddi -socodku wuxuu noqday mid aad iyo aad u sarreeya. Qaybo ka mid ah waxay gaareen daraasiin habraacyo, kuwaas oo u baahan saxitaanka xaashida la buuxiyey ...
Sida loo doorto faashadda geeska？
Isticmaalayaasha yaqaana mashiinnada xirmidda geesku waxay og yihiin inay u qaybsan yihiin mashiinnada geeska gebi ahaanba si otomaatig ah iyo kuwa toos ah. Laakiin macaamiisha qaarkood ma yaqaaniin sida loo doorto marka la iibsanayo banders. Dhab ahaantii, waxay leeyihiin astaamo u gaar ah, inta badan si ay u arkaan midka ugu sui ...
MAXAA LOO ISTICMAALAA MAKIINADDA DHEELKA AH?
Mashiinka caaryada birta ah ee CNC waa nooc ka mid ah aaladda mashiinka kontaroolada tirooyinka kumbuyuutarka ee xardho biraha wanaagsan iyo qodista. Iyada oo ku saleysan mashiinka wax lagu xardho ee CNC, awoodda dunmiiqa iyo matoorada hawlgalka ayaa la kordhiyaa, oo jirka mashiinku wuxuu u adkeysan karaa xoogga, isagoo ilaalinaya hi ...
15000W mashiinka goynta laser -ka fiber -ka
Tan iyo markii mishiinka goynta leyber -ka uu jabiyay beertii jarista warshadaha, wuxuu si joogto ah u qaboojiyay qeexidda cusub ee goynta laser; iyo xeerarka cusub ee goynta indhaha, waxay beddeshay jihada horumarka ee farsamada goynta laser -ka adduunka. Waxaa had iyo jeer ciyaaray a ...
Faa'iidooyinka mashiinka goynta plasma
1.Waxaan samaynaa xariiqdan sanado badan, waxaan leenahay khibrad hodan ah iyo aqoon xirfadeed, waxay kuu oggolaan doontaa inaad hesho mashiinka goynta plasma ugu habboon oo leh qaabeynta saxda ah. Awooddani waxay kuu oggolaan kartaa inaad ka fogaato qalad badan oo aad iska ilaaliso xoogaa dhibaato ah. Warshadda kale badanaaba ma laha khibraddan, waxayna keentaa xoogaa ...
APEX2030 Qalabka tooska ah ee beddelka aaladda cnc router ayaa loo diri doonaa Lithuania
Tilmaamaha APEX2030 toosan ATC alwaax cnc router 1. Qaab dhismeedka alxanka leh ee birta qafiifka ah oo xasilloon heerkulka sare, wuxuu hubiyaa dhalanrog ugu yaraan, adayg aad u fiican iyo xoog xoog leh. 2.Japanese YAKSAWA motor servo wuxuu mashiinka ka dhigayaa mid deggan oo leh buuq hoose, xawaare sare iyo sare ...
Faa'iidooyinka xaashida iyo mashiinka goynta laser fiber -ka 2021 -ka
Saxanka ugu ammaanta badan iyo mashiinka goynta laser fiber -ka ee 2021 ayaa halkan jooga. Waqtigan xaadirka ah, waxaa suuqa yaalla mashiinnada goynta leysarka birta ah iyo mashiinnada goynta leysarka. Si kastaba ha noqotee, macaamiil aad iyo aad u badan ayaa u baahan inay gooyaan ma aha oo kaliya xaashiyo laakiin sidoo kale tuubooyin ku shaqeeya birta. Habka dhaqanka ...
Soosaarka Ganoderma lucidum iyo saamaynteeda dawooyinka
Waa maxay soosaarka Ganoderma lucidum? Soosaarka lucidum -ka Ganoderma waxaa lagu diyaariyaa hababka sida soo saarista biyaha kulul (ama soo saarista aalkolada), fiirsiga faaruqinta, qalajinta buufinta ee miraha midhaha Ganoderma lucidum ee bislaaday oo la goostay waqtiga ku habboon.
Sida loo doorto derbiga gacanta ee jabay Ganoderma lucidum spore budada
Waa maxay Ganoderma lucidum spore budada? Ganoderma lucidum wuu koraa → Ganoderma lucidum wuu bislaaday ores xuubabka waxaa laga soo saaraa gunta Ganoderma lucidum daboolka powder budada spore waa la goostaa powder budada spore waa la doortaa
Talooyin lagu garto Ganoderma lucidum spore oil
Waa maxay Ganoderma lucidum spore oil? Marka Ganoderma lucidum bislaato, nooc ka mid ah unugyada jeermiska ovoid oo loo yaqaan “Ganoderma lucidum spores” ayaa laga soo saari doonaa salka daboolka. Saliidda spore -ka ee Ganoderma lucidum waa walaxda firfircoon ee lipid ee ku jirta Ganoderma lucidum spores. Waa e ...
Macmiilka reer Argentine wuxuu amar ku bixiyay mishiinka birta caaryada ee caaryada aluminiumka iyo farsamaynta birta
Mashiinka caaryada birta ah waa nooc mashiinno CNC ah oo shaqooyin badan leh, oo la mid ah aaladda mashiinka kontaroolada tirooyinka ee caadiga ah, mashiinka caaryada birta wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa habka wax-shiidka iyada oo barnaamijka CNC uu xakameynayo dhaqaaqa dhagaxa sida waafaqsan habsocodka ...
Sharaxaad kooban oo ku saabsan mashiinka goynta leyber -ka ee biibiilaha iyo tuubada biraha goynta
APEX2060 -ka cusub ee mashiinka goynta leybaarka fiber -ka ayaa leh waxqabad sare iyo jawaab degdeg ah, laakiin waa maxay faa'iidooyinka ay leedahay? fadlan hoosta iska hubi: 1.Chuck design hamping
Jingliu Road, Degmada Huaiyin, Jinan City, Shandong Provice, China.